PCB Manufacturing - Telozoro Volamena PCB & Technologies Co., Ltd
Service Ny Lafitsara
Mikoriana Tabilao ny Quality Management
PCB ny manam-pahaizana manolotra lafo PCBs ho an'ny be toy ny kely toy ny 1 tapa ho toy ny avo tahaka ny sekely 5000. Ankoatra izany, ny PCB mijery ny endrika rehetra mety famolavolana ny fahadisoana. Izany fanompoana tsy ho hita ao amin'ny trano FABRICATION PCB indrindra. Koa, tena henjana manaraka PCB manufacturingworkflow mba hiantohana ny kalitao avo lahateny. Telozoro Volamena PCB mpanjifa avy any an-lehibe isan-karazany ny orinasa sy ny raharaham-barotra fizarana, toy ny Semiconductor, orinasa computing, tambajotra sy ny fifandraisan-davitra, Wireless tsena, fitsaboana sy biolojika, indostria sy nandinika lalina rafitra, Network fitehirizana, fiara elektronika, Hafanàm-po an kilalao, laboratoara fitaovana, sns izany no mahatonga afaka miantehitra amin'ny PCBAmanufacturing sy ny PCB asa fivoriambe. Amin'ny maha Izao, isika mametraka ampahany amin'ny tranga mpanjifa noho ny boky. Afaka manao an-tsaina noho ianao. Amin'ny ankapobeny, ny mpanjifa manerantany no manaraka fahatsapana ny asa: valiny haingana, vidiny mirary ambaratonga, ambony mpanjifa fomba fijery, fanoloran-tena tsara.
Telozoro Volamena PCB vola mihoatra ny 10 tapitrisa dolara amerikana noho ny orinasa trano, anisan'izany ny PCB sy PCBA fivoriambe fitaovana (Acid Copper alalan'ny-lavaka voapetaka, CNC ary atsofony, PCB Etching Machine, PCB mihaohao Machine, ambonin'ny tendrombohitra Machine, Reflow fatana, mandeha ho azy Optical Inspection (Aoi) , Wave Soldering) sy ny rafitra ara-tsiansa ny fitantanana, alalan 'izany ny PCB sy ny PCB fivoriambe fepetra azo tanteraka amin'ny kalitao avo sy araka ny fenitra iraisam-pirenena.
Fandavahana kely indrindra haben'ny 0.1mm (~ 4mil)
1 ny 36 sosona
Hentitra (Malagasy FR4), Flex, Aluminum tohanan'ny.
FR4 *, Rogers, Duriod, Polyimide, CEM1,3, etc.
PCB FABRICATION hateviny manomboka amin'ny 8mil ho henjana sy feno 0.2mm for Flex.
0.4 grama ny 4 grama varahina
Minimum Trace / Space ny 3mil.
Vita ahitana; asitrika volamena, na volafotsy, Tin, Lead sy OSP HASL malalaka.
Board farany loko; Green, Blue, Black, Yellow, Red, White.
Tsy mifidy A + kilasy copperplate mba hahazoana antoka milamina fampisehoana (general FR-4) ny PCB FABRICATION. Nandritra ny dingana PCBA orinasa mpamokatra entana, mandeha ho azy sy ny tsipika varahina voapetaka haingam-pandeha ary atsofony milina (marika: Tmax) mba hanao fifadian-kanina marina sy ny fanaterana antoka. Faritra vita pirinty rehetra birao dia ho hita amin'ny alalan'ny nandroso milina mandeha ho azy fangadiana manidina (na fitsapana rafitra) amin'ny dingana manaraka mba ho azo antoka dia OK PCB tsirairay avy ao anaty faritra ho endrika ivelany. Ny dingana voalohany nanaovana ny PCB, fotoana no tena zava-dehibe foana. Ny mora-fivoriambe kosa ny PCB prototyping, Eco (injeniera fiovana baiko) sy BGA reballing / rework asa mitondra ny nitarika ny fotoana amin'ny lafiny ambony indrindra, na inona na mba boky (toy ny kely toy ny miray). Ny 20 ora PCB santionany fanompoana mazava Efa mpamonjy aina ho an'ny lehibe vokatra maro famolavolana ekipa miatrika fe-potoana hentitra. Ny injeniera dia hanaraka hentitra sy voadio pcba workflow mba hanatanteraka ny dingan'ny PCB orinasa mpamokatra entana, sy ny fivoriana PCB. Ny PCBA be zana-kazo dia nanompo ho an'ny mpanjifa ny orinasa isan-karazany, toy ny fiara, fitsaboana & fahasalamana, tontolo karatra, sy ny fitaovana elektronika mpanjifa. Amin'ny ankapobeny, dia manatanteraka fitsipika ny fitantanana sy ny kalitao ISO IPC-A-610E mandritra dingana ny Narahi-fitaovana, lamba fanontam-pirinty, smt, Aoi, ipqc, mandroboka sy PCBA fitsapana. Amin'ny ankapobeny, ny PCB nitranga fahiny nanompo azo tsara eto amintsika. Koa satria azontsika ny vokatra namolavola vahaolana, dingana rehetra aty aoriana, dia ho fehezin'ny PDCA hentitra ny fitantanana ny workflow. Ny injeniera dia nanolo-tena ara-potoana miresaka aminao sy hamaha ny olana rehetra. Ankoatra izany, ny orinasa mpamokatra entana PCBA manerantany fahaiza-manao dia afaka mampihena ny vola lany any an-dafin'ny fanantenana sy tsy misy manahirana. Isika no ho tsara indrindra PCB mpanamboatra sy ny mpiara-miasa fivoriana PCB.
(Raha mila sary tsindrio eto)
Tsy mifidy taratasy mpamatsy ambony mba hahazoana antoka milamina fampisehoana (general FR-4). Nandritra ny dingana orinasa mpamokatra entana, mandeha ho azy sy ny tsipika varahina voapetaka haingam-pandeha ary atsofony milina (marika: Tmax) mba hanao fifadian-kanina marina sy ny fanaterana antoka. Faritra vita pirinty rehetra birao dia ho hita amin'ny alalan'ny nandroso milina mandeha ho azy fangadiana manidina (na fitsapana rafitra) amin'ny dingana manaraka mba ho azo antoka dia OK PCB tsirairay avy ao anaty faritra ho endrika ivelany.
Izahay vola mihoatra ny 10 tapitrisa USD eo amin'ny fitaovana ao anatin'izany ny PCB electroplate andalana, ary atsofony milina, nanidina fangadiana, sns screener lahatsoratra Ireo rehetra ireo no ho fanatitra hohanina isam-bolana fahaizany ny 15.000 metatra toradroa PCB orinasa mpamokatra entana, izay azo ampiharina ho an'ny kely-salantsalany-raharaham-barotra lehibe didy . Mba hitsena ny tsena isan-karazany fangatahana, dia ho avy vahaolana ho an'ny orinasa mpamokatra entana samy hafa manaraka karazana PCB. Amin'izany fomba izany, dia afaka hahatratra mpanjifa fanitarana zavatra ilaina amin'ny alalan'ny tolotra hentitra loatra.
Malefaka pirinty faritra orinasa mpamokatra entana HDI PCB orinasa mpamokatra entana Aluminium PCB orinasa mpamokatra entana
Flex hentitra PCB orinasa mpamokatra entana Ranomainty Carbon PCB orinasa mpamokatra entana Jamba nalevina alalan'ny PCB orinasa mpamokatra entana
Heavy varahina PCB orinasa mpamokatra entana Impedance PCB orinasa mpamokatra entana Hodorana any amin'ny orinasa mpamokatra entana, birao PCB
Mil-spec PCB orinasa mpamokatra entana Automotive PCB orinasa mpamokatra entana Network ny fifandraisana PCB orinasa mpamokatra entana
Backplane PCB orinasa mpamokatra entana Lead malalaka PCB orinasa mpamokatra entana Low vidiny PCB orinasa mpamokatra entana
4 Layer PCB orinasa mpamokatra entana 6 Layer PCB orinasa mpamokatra entana 8 Layer PCB orinasa mpamokatra entana
Rehefa nahavita dingana PCB orinasa mpamokatra entana, ankehitriny tonga ny fotoana mba hanomanana Narahi-Bom fitaovana araka ny lisitra sy hanomboka ny fivoriana PCB dingana na mijery indray ny PCB famolavolana. Koa ho an'ny antsipiriany bebe kokoa, dia afaka hijery bebe kokoa ny tolotra.
Address: Telozoro Volamena PCB & Technologies Ltd